Kan OPDO aja’iba, ni jira jechuu isanittii moo? Ya Waqaa kanara nu bararrii! | robemedia
Home AfaanOromo Kan OPDO aja’iba, ni jira jechuu isanittii moo? Ya Waqaa kanara nu...
Kan OPDO aja’iba, ni jira jechuu isanittii moo? Ya Waqaa kanara nu bararrii!
Duraan dursee quubee koottiif dhiffammaa guudaan gafadhaa. Hara walga’ii iciitii OPDO ilaaleen jira. Salphinnaa waan natti fakkatteef afaan birattiin barressuu hin barbannee.
Ana wantii naan gale tokkottuu jira, rakina hawaasa kengaa ni beeknaa. Ilaala dhabnii Oromoon guddaa kaanaan bulchaa jedhuu tokko ajandaa mata ofi bafattee irratti mari’achuu hin danda’uu. Ajandaan kan dhufuuf affaan ameraffattiin bara’ettii goftaa isanii ira gadii dhuffaaf. Isaan imo ta’anittii wanta jeedhammee sana murtessuuf yerro offi gubu. Oromoon dina ofi ni bakka, dinni kenga dhaba isiin ergattuu sana, saba tiqoo kessa dhabnii baattee suni, qawwee waan qabduuf saba kana ofi jalattii bulchuu akka hin dandegne OPDOon baruuttu irra jira.
Ofifuu rakkinnaa kessa jirtaanni akkamitti saba guda kana bulchuuf carqattaan, yaa goftaa Rabbii, kuni safuudhaa.
Dhabnii TPLF, fashistiin Tiigrottaa, ummattaa kengaa lafarraa dugugdee, lafa irra fudhattee, ummattaa kengaa hiiyoomsee, ajjestee, mana hidhattii akka barbadettii guurtee, shamarraan kegnaa guudedaa nu bulchuu akka hin dandangee baruttuu isinirraa jira. Hin sodattiinaa, isiinis bilissaa bassuuf ummaani kengaa gamtaadhaan wargammaa gurguddaa kafala jira. Isiin yoo dandessaan saba kessaan wajjiin gurma’aa, you dadhabdaan dhangoo kessaan dhiissaa.
Saba biicuun bittammuun ummattaa guuddaa kanaaf salphinnaa guddaadhaa! Ni’ii dinnee jira, kan kessaan hin beknuu!
Previous articleTPLF barbarism against Surma ethnic group of Lower Omo basin in Southern regional state
Next articleEthiopian students demand end to police crackdowns in rare protest